/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / Bevacizumab (216974-75-3)
SKU: 216974-75-3. Category: R & D mmeghachi omume
Bevacizumab ntụ ntụ a na-ekewa ya dịka "mgbochi monoclonal" na "mgbochi angiogenesis" ọgwụ.Bevacizumab nyere site na infusion n'ime vein (intravenous, IV). A na-enyefe nkeji ụbọchị nkeji 90. Oge infusion nwere ike emecha mee ka ọ dị mkpirikpi na 30 nkeji ma ọ bụrụ na ọ dị mma ...
Molekụla Formula: C6638H10160N1720O2108S44
Melt Point: 61 - 71 Celsius C
Nchekwa Nche: 2 - 8 Celsius C
Mgbochi na-egbuke egbuke bụ ụdị ọhụrụ nke ọgwụgwọ kansa cancer "ezubere iche." Ngwọrọgwu bụ akụkụ nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Dị ka o sina dị, ahụ na-emepụta ọgwụ nje na nzaghachi (dị ka protein na germ) na-abanye n'ahụ. Mgbochi ahụ na-ejikọta na antigen iji mee ya maka mbibi site na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Na laabu, ndị ọkà mmụta sayensị nyochaa antigens kpọmkwem n'elu sel cancer (lekwasịrị anya) iji chọpụta protein iji kwekọọ na antigen. Mgbe ahụ, na-eji protein protein ụmụ anụmanụ, ndị ọkà mmụta sayensị na-arụ ọrụ iji mepụta mgbochi pụrụ iche nke ga-etinye aka na antigen. Ngwurugwu ga - ejikọta antigens ndị yiri ya dị ka igodo dabara mkpọchi. Teknụzụ a na-enye ohere maka ọgwụgwọ iji dozie mkpụrụ ndụ ụfọdụ, na-eme ka mkpụrụ ndụ ndị na-egbu egbu na-egbu egbu. A na-emepụta ọgwụgwọ mgboclonal antibody na-eme nanị maka ọrịa cancer na ndị na-ahụ maka ọrịa (na ọgwụ ndị ọzọ) achọpụtara.